Kambodza : Teknolojia Fampahafantarana Ny Tsirairay aka Atrikasa Fidirana Tranokala · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Janoary 2018 6:31 GMT
Miha maro ireo Kambodziana voasariky ny fanoratana Blaogy tamin'ny alalan'ireo atrikasa nokarakaraina teny amin'ny Oniversiten'i Phnom Penh, renivohitr'i Kambodza.
Tsy dia lehibe manao ahoana toy ny any amin'ny faritra hafa akory ny tontolon'ny blaogy ao Kambodza, noho ny tahan'ireo mpampiasa aterineto isan'ny ambany indrindra ao Atsimo Atsinanan'i Azia. Kanefa taorian'ny fiaingàn'ny fanoratana blaogy tamin'ny taona lasa, nahitàna fiovàna goavana tokoa io tontolo io. Tany amin'ny Jolay 2005 no nisian'ny fiofanana voalohany mikasika ny fanoratana blaogy tamin'ny faritra sasantsasany. Koa satria ny tanora no loha laharana tamin'ny fanarahana ny hiaka farany amin'ny teknolojia, fikambanana evanjelika iray tao an-toerana no nanomboka nampahafantatra azy ireo ny fomba “fanoratana blaogy”. Nanomboka teo ny tantaran'ny fanoratana blaogy tao Kambodza.
Nomena anarana hoe ‘Personal Information Technology’ (Teknolojia Fampahafantarana Ny Tsirairay), tohizan'ilay vondrona tarihin'ilay blaogera evanjelista Mean Lux ny asa sosialiny ho fanapariahana ny feo miaraka amin'ireo namany marobe. Ny volana Aogositra tamin'ity taona ity, nampanao fampiofanana tao amin'ny International University, toeram-pampianarana ambaratonga ambony ao Phnom Penh, izy ireo. Hoy ilay mpampiofana iray nanoratra “Tena traikefa lehibe ho ahy ny naha-mpampiofana ahy nandritra iny atrikasa iny.” Raha te-hijery manontolo (miaraka amin'ny sary) ilay fampiofanana, azafady tsindrio eto ary eto.
Nandritry ny andiany faharoa tamin'ilay hetsika, teo ho eo amin'ny 400 ireo mpandray anjara tonga tamin'ilay atrikasa izay notanterahina tany amin'ny Oniversite iray hafa miaraka miasa amin'ny City Link, iray amin'ireo mpanome tolotra Aterneto ny firenena. Taorian'ny fampianarana, ilay mpampiofana iray Kalyan nanao famintinana toy izao :
Omaly, tao amin'ny PUC [Pannasastra University of Cambodia – Oniversiten'i Pannasastra ao Kaombodza] no natao ilay atrikasanay momba ny Personal Information Technology, ary tsy nampoizinay fa nihoatra ny 400 ireo mpandray anjara, tao anatin'izany ireo Sojabe sy ny mpampiofana. Nitaintaina be ihany aho kanefa vitako ny nitàntana tsara ilay izy satria namatsy toeram-pandraisana sy fitaovana hanatanterahina ilay hetsika ny PUC. Ambonin'izany, nahazo fanohanana ara-pitaovana avy amin'ny City Link koa izahay. Satria be loatra ireo mpianatra nisoratra anarana hanokatra bilaogy tao amin'ilay toerana, dia lasa tena nihisatra be ny tambajotra. Noho io antony io, nampiakarin'i City Link ny hafainganam-pandehany hanamoràna izany.
Olona manodidina ny 400 no nanatrika ilay atrikasa andiany faharoa mikasika ny fidirana anaty vohikala tao Pannasastra Oniversiten'i Kambodza. Sary : nakarin'i Kalyan.
Ary nampian'ilay mpiara-miasa hoe :
Andro iray lehibe eo amin'ny tantaram-piainantsika ity andro ity, angamba. Nanome fiofanana ho anà mpianatra efa maherin'ny 400 ary mpiasa akademika tao amin'ny PUC izahay, ary tamin'ny fiteny Anglisy ihany koa dia nanao fampihomehezana momba ny fiteny faharoa fampiasany ihany koa i Chantra. Tena fahombiazana lehibe ilay izy. Nampalahelo fa tsy teo i Viirak, raha teo mantsy izy, vao mainka nahafinaritra ilay atrikasa !
Hisy atrikasa iray vao ho karakaraina ao amin'ny Oniversiten'i Newton Tilay. “Eny àry, tsy hitovy amin'ilay teo aloha intsony amin'ity indray mitoraka ity, ho tsaratsara kokoa sy ho lehibe kokoa hatrany…Tena malahelo aho fa tsy afaka ny hanatrika azy io. Antanaina fa ho amin'ilay iray manaraka, izay ho tontosaina ny 16 Septambra ao Newton Tilay University (NTU) (Oniversiten'i Newton Tilay). Any izany mihaona!”
Raha tafaverina tao Japana, taorian'ny namakiany ilay boky mikasika ny fitondrana Khmer Rouge, LA RÉPUBLIQUE KHMÈRE, nanoratra tsikera toy izao i Dara, mpianatra Kambodziana , ho fanehoana ny fihetsempony sy ho famaritana ny fiheverany manokana. Liana ihany koa tamin'ny maha-mitombina ‘ireo boky voasoratra ilay Kambodziana 23 taona avy ao Nagano.
…650.000 no isan'ny mponina tao amin'io tanàna io ny taona 1970 ary tafakatra ho 3.000.000 itamin'ny 1975. Matetika tapaka hatrany ny fifamoivoizana. Mihalafo noho ny omaly ny vidin-javatra androany. Na efa nasondrotra 300% aza ny karaman'ny mpiasam-panjakana, mbola mafy amin'ny olona hatrany ny fiainana. Teo anelanelan'ny 1972 sy 1974 no niakatra hatramin'ny 400% ny vidin'ny entana ilaina andavanandro. Ho an'ny fianakaviana tsotsotra, vary sy legioma endasina tsy misy hena no hohanina. Nanomboka ny faraparan'ny 1974, nila ho isanandro ny fanapoahana baomba etsy sy eroa tao an-tanàna. Misy maratra sy maty isanandro. Farany, tonga ny 17 aprily 1975. Faly ny mponina satria nihevitra fa tapitra hatreo ny fijaliany. Afaka ny hiaina milamina sy miadana indray kanefa fiatombohana fijaliana iray mafimafy kokoa izany …